Waa Maxay Sababta Uu Frank Lampard U Doonayo In Uu Liverpool Ku Garaaco UEFA Super Cup-ka – Kooxda.com
HomePremier LeagueWaa Maxay Sababta Uu Frank Lampard U Doonayo In Uu Liverpool Ku Garaaco UEFA Super Cup-ka
Waa Maxay Sababta Uu Frank Lampard U Doonayo In Uu Liverpool Ku Garaaco UEFA Super Cup-ka
Frank Lampard ayaa laga yaabaa in uu ku cusbyahay shaqada tababaranimo ee chelsea laakiin Cadawga Liverpool ayaa sheegay in isaga iyo cid walba oo ku xidhan kooxda Chelsea ay si aad ah u doonayso in ay Liverpool ku garaacdo koobka UEFA Super Cuo.
Xiddiga oo ahaa xiddig si weyn ula xafiiltama Halyeeyga Liverpool ee Steven Gerrard kuwaas oo muddo 10 sano ah ku xafiiltamayay khadka dhexe ee xulka qaranka England, Lampard ayaa kulamo badan ka hor yimid Liverpool sanadihii uu ciyaarayay kubada cagta.
Lampard ayaa Liverpool ka hor tagay 5 kulan oo champions League ah intii u dhexaysay 2004 ilaa 2009 iyada oo uu Lampard ku bilowday dhamaan kulamadaas.
Halyeeyga ayaa Chelsea u ciyaaray 648 kulan isaga oo kula guulaystay 3 Premier League, 4 FA Cup, 2 League cup, Champions League iyo Europa League laakiin aan kula guulaysan UEFA Super Cup.
Ka hor kulanka Arbacada ee ay kooxdiisu ka hor tagi doonto Liverpool ayuu Lampard yidhi” Waa koob ay kooxdu si aad ah u doonayso in ay ku guulaysato sababta oo ah waligay anigu kuma guulaysan, waxa jira xiddigo badan oo aan ku guulaysan sidaas darteed waa in aan wax walba u qabano sidii aan ugu guulaysan lahayn”.
“Waxa aan ka hor tagaynaa koox Leh tayo waana Liverpool waxana ay arintaas ka dhigaysaa final xiiso leh”.
“Waa lagaa badin karaa Final; waa koox aad u adag, laakiin waxa aan meesha oolin in aanu Mar-Masiyo samayno, diyaar maanu ahayn, maanu lahayn rabitaan iyo wax la mid ah waa in aanu isku dayno in aanu guul gaadhno kulanka”.
“Waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah kulamadii ugu horeeyay ee Rasmiga ah ee aan kooxda hogaaminayo aniga oo tababare ah”.
“Xiddig walba oo ka mid ah kooxdu waxa uu ogyahay muhiimada kulanka kooxdu waa in ay wax walba u samayso sidii ay ugu guulaysan lahayd koobka sababta oo ah waxa uu noqon doonaa kulan adag”.
“Waxa uu noqon doonaa kulan adag laakiin garoonka kama soo bixi karno anaga oo si leh “waxa aanu qaban karnay sidan, waxa aan iska khasaarinay fursadan, ama diyaar umaanu hayn kulanka mana jiri karo wax mar-marsiyo ah”.
Koox Lama Filaan Ah Oo Isku Dayday In Ay Barcelona & Real Madrid Ku Garaacdo Saxiixa Neymar, Kooxda Ay Tahay & Jawaabtii Ay Heleen
PSG Oo Kor U Qaaday Qiimaha Ay Ku Iibinayso Neymar Xilli Ay Diiday In Xiddigo Lagu Daro Heshiiska